လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း သုံးဆယ်ကျော် တုန်းက အ, သုံးလုံး စာသင်ပေး ဖူးတဲ့ အမှတ်တရ လေးကို မျှဝေ လာတဲ့ တက္ကသိုလ် ဂွမ်းပုံ – Cele Posts
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း သုံးဆယ်ကျော် တုန်းက အ, သုံးလုံး စာသင်ပေး ဖူးတဲ့ အမှတ်တရ လေးကို မျှဝေ လာတဲ့ တက္ကသိုလ် ဂွမ်းပုံ
ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံ လောကမှာ နှစ်ပေါင်းကြာ ရှည်စွာ အောင်မြင်မှုကို ထိန်းထားနိုင် သလို လက်ရှိအချိန် ထိလည်း ရိုက်ကူးရေးတွေ၊ တီဗွီအစီ အစဉ်တွေမှာ အမြဲမပြတ်ပါဝင်နေရသူ ကတော့ တက္ကသိုလ်ဂွမ်းပုံပါ။ ဒါ့အပြင် ဇာတ်ပို့ဇာတ်ရံတွေအတွက် မျှော်မှန်းရခက်တဲ့ အကယ်ဒမီဆုကိုလည်း ရယူနိုင်ခဲ့ပြီး တက္ကသိုလ်ဂွမ်းပုံ ကတော့ ပရိသတ်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အပြည့်အဝသိမ်းပိုက်ထားနိုင်သူတစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
တက္ကသိုလ်ဂွမ်းပုံကတော့ သူ့ရဲ့တနေ့တာအကြောင်းအရာလေးတွေကို လူမှုကွန်ရက်မှာ အမြဲမပြတ်မျှဝေပေးလေ့ရှိပြီး ဒီနေ့မှာ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း (၃၀) ကျော်က အမှတ်တရ ပုံရိပ်လေးတစ်ခုကို မျှဝေလာပါတယ်။ ကာလ အတော်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ အဖြူအမည်းဓာတ်ပုံလေး ကိုတော့ အသိမ်းလွန်နေတာကြာပြီဖြစ်ပြီး ဒီနေ့မှပြန်ရှာ တွေ့လို့ ဝမ်းသာကြည်နူးစွာနဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် မျှဝေပေး ခဲ့တာပါ။
ဒီဓာတ်ပုံလေးကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၉၈၄) ခုနှစ် စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ဗန်းမောက်မြို့၊ ဆင်ကန်ရွာမှာ တက္ကသိုလ် အ. သုံးလုံးအဖွဲ့က လွှတ်လို့ အ. သုံးလုံး သွားရောက်သင်ကြားပေးထားတဲ့ပုံလေးဖြစ်ပြီး တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ ဘဝကတည်းက ပါးဖောင်းဖောင်းလေးနဲ့ချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ ဂွမ်းပုံကို မြင်တွေ့ရမှာပါ ပရိသတ်ကြီးရေ.. ပရိသတ်တွေကတော့ ဂွမ်းပုံရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကို ချစ်စနိုးနဲ့မှတ်ချက် ပေးခဲ့ကြသလို တချိန်တုန်းက အမှတ်တရတွေ ကိုလည်း မေးမြန်းခဲပါတယ်။
လှနျခဲ့တဲ့ နှဈပေါငျး သုံးဆယျကြျော တုနျးက အ, သုံးလုံး စာသငျပေး ဖူးတဲ့ အမှတျတရ လေးကို မြှဝေ လာတဲ့ တက်ကသိုလျ ဂှမျးပုံ
ဇာတျပို့ဇာတျရံ လောကမှာ နှဈပေါငျးကွာ ရှညျစှာ အောငျမွငျမှုကို ထိနျးထားနိုငျ သလို လကျရှိအခြိနျ ထိလညျး ရိုကျကူးရေးတှေ၊ တီဗှီအစီ အစဉျတှမှော အမွဲမပွတျပါဝငျနရေသူ ကတော့ တက်ကသိုလျဂှမျးပုံပါ။ ဒါ့အပွငျ ဇာတျပို့ဇာတျရံတှအေတှကျ မြှျောမှနျးရခကျတဲ့ အကယျဒမီဆုကိုလညျး ရယူနိုငျခဲ့ပွီး တက်ကသိုလျဂှမျးပုံ ကတော့ ပရိသတျခဈြခွငျးမတ်ေတာကို အပွညျ့အဝသိမျးပိုကျထားနိုငျသူတဈယောကျလညျး ဖွဈပါတယျ။
တက်ကသိုလျဂှမျးပုံကတော့ သူ့ရဲ့တနတေ့ာအကွောငျးအရာလေးတှကေို လူမှုကှနျရကျမှာ အမွဲမပွတျမြှဝပေေးလရှေိ့ပွီး ဒီနမှေ့ာ လှနျခဲ့တဲ့နှဈပေါငျး (၃၀) ကြျောက အမှတျတရ ပုံရိပျလေးတဈခုကို မြှဝလောပါတယျ။ ကာလ အတျောကွာမွငျ့နပွေီဖွဈတဲ့ အဖွူအမညျးဓာတျပုံလေး ကိုတော့ အသိမျးလှနျနတောကွာပွီဖွဈပွီး ဒီနမှေ့ပွနျရှာ တှလေို့ ဝမျးသာကွညျနူးစှာနဲ့ ပရိသတျတှအေတှကျ မြှဝပေေး ခဲ့တာပါ။
ဒီဓာတျပုံလေးကတော့ လှနျခဲ့တဲ့ (၁၉၈၄) ခုနှဈ စဈကိုငျးတိုငျး၊ ဗနျးမောကျမွို့၊ ဆငျကနျရှာမှာ တက်ကသိုလျ အ. သုံးလုံးအဖှဲ့က လှတျလို့ အ. သုံးလုံး သှားရောကျသငျကွားပေးထားတဲ့ပုံလေးဖွဈပွီး တက်ကသိုလျကြောငျးသူ ဘဝကတညျးက ပါးဖောငျးဖောငျးလေးနဲ့ခဈြဖို့ ကောငျးတဲ့ ဂှမျးပုံကို မွငျတှရေ့မှာပါ ပရိသတျကွီးရေ.. ပရိသတျတှကေတော့ ဂှမျးပုံရဲ့ဓာတျပုံလေးကို ခဈြစနိုးနဲ့မှတျခကျြ ပေးခဲ့ကွသလို တခြိနျတုနျးက အမှတျတရတှေ ကိုလညျး မေးမွနျးခဲပါတယျ။
ကိုဗစ် ကပ်ဘေး ကားရှင်း တာကို အခွင့်ကောင်းယူ နေကြတဲ့ ပြိုင်ကား တွေကြောင့် အသက် ဆုံးရှုံးခဲ့ ရတဲ့ ညီလေး
ပရောဂျက် ကေ အဖွဲ့အား ခွင့်ပြု ချက် မတင် ပဲ ဆန္ဒ ပြ သူများ ပုဒ်မ ၁၉ ဖြင့် အမှုဖွင့် ခံရ